Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု ( ၂ ) (Read 93379 times)
ပေါင်းတာ and 1 Guest are viewing this topic.
« Reply #120 on: May 25, 2015, 03:27:20 PM »
« Reply #121 on: June 05, 2015, 03:20:00 PM »
ကျမက အပြောင်းအလည်း မမြန်တတ်ပါဘူး မောင်..
စိမ်းတုန်းကလည်း ဒီအရသာ၊ မှည့်သွားတော့လည်း ဒီအရသာပါပဲ မောင်..
ကျမကို အစိမ်းတိုင်း စား စား၊ ဟင်းချက် စားစား မောင် အဆင်ပြေသလို စားပါ မောင်..
အသုတ်ထဲ ထည့် နယ်လည်း ရပါတယ် မောင်..
တခုတော့ ရှိပါတယ် မောင်..
ကျမကို စားရင် နဲနဲတော့ ချွေးထွက် ပါလိမ့်မယ် မောင်..
ကျမကို ထောင်းချင်ရင်တော့ မောင့် ကျည်ပွေ့က မာမာ ကြီးကြီးမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် မောင်..
ဘာလို့ ဆို ကျမ အစိက သေးပေမယ့် တော်ရုံ ကျည်ပွေ့နဲ့ ကွဲဘို့ မလွယ်လို့ပါ မောင်..
ကျမ ကို တကယ်ချစ်ရင် အစိကွဲအောင် ထောင်းပေးပါ မောင်..
ကျမက ငရုတ်သီးပါ မောင်..
« Reply #122 on: July 27, 2015, 10:24:40 AM »
စိုင်ကော်လို့ ခြုံပေါ်ရောက်ဆိုသလို မောင်မင်းခေါင်တစ်ယောက် လေ့လာရေးခရီစဉ်တစ်ခုဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့သွားရောက်ရလေသည် ။
လေ့လာရေးအဖွဲ့ အား သမ္မတ အိုဘားမားက လက်ခံတွေ့ ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည့်အခါ မောင်မင်းခေါင် ခေါင်းနပမ်းကြီးသွား၏ ။
အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိသည့် တောသားမင်းခေါင်ကို လေ့လာရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်က အခြေခံနှုတ်ဆက်စကားကို သင်ပေးသည် ။
သမ္မတနှင့်တွေ့ ပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည့်အခါ How are you ? ( နေကောင်းလား ) လို့ပြောဘို့ သင်ပေးသည်။ ထိုအခါ သမ္မတက
I'm fine , and you ? ( ကောင်းပါတယ်..မင်းရော.) လို့ ပြန်ပြောလိမ့်မယ်..။ အဲ့ဒီအခါကျရင် မင်းက Me too ( ကျနော်လည်း
ကောင်းပါတယ် ) လို့ပြောလိုက် ပြီးရင် နောက်တစ်ယောက်ကို ဆက်ပြီး နှုတ်ဆက်သွားလိမ့်မယ်လို့သင်ပေးရှာပါတယ်..။
မောင်မင်းခေါင်လည်း ဒါလေများ လွယ်လွယ်လေးဆိုပြီး သမ္မတနဲ့ တွေ့ တဲ့အခါ How are you ? လို့ပြောရမဲ့အစား Who are you လို့ 
မှားပြီး ပြောလိုက်မိတယ်..။ အိုဘားမား တော်တော်လန့် သွားတယ်..။ ဒါပေမဲ့ မှားပြီး ပြောလိုက်မှန်းသဘောပေါက်လို့ဟာသဖောက်ပြီး
Well , I'm Michelle's husband, hahaha ( ကောင်းပါပြီ..ကျနော်က မီချယ်ရဲ့ ခင်ပွန်းပါ.ဟားဟားဟား ) ဆိုပြီး ပြောလိုက်တယ်.။
မောင်မင်းခေါင်လည်း အားရ၀မ်းသာ ပြောလိုက်တယ်..Me too hahaha ( ကျနော်ရောပဲဟားဟားဟား.....)
ဘ၀အမောလေးတွေ ရယ်မောရင်းနဲ့ ပြေပျောက်နိုင်ပါစေ
« Reply #123 on: July 29, 2015, 11:38:16 AM »
အမေ......" သမီးနိုနို စကပ်အတိုဝတ်ထားတဲ့အခါ ဒါန်းမစီးရဘူးနော် သမီးရဲ့ အတွင်းခံကို ကောင်လေးတွေ တွေ့ သွားလိမ့်မယ်.."
သမီး...... " ဟုတ်ကဲ့မေမေ "
တရက် သမီးဖြစ်သူက အမေ့ ဆီ ပြေးလာပြီး
" မေမေ.မေမေ ဒီနေ့ သမီး မင်းခေါင်နဲ့ဒါန်းစီးပြိုင်တာ သမီး နိုင်တယ်မေမေ "
" သမီး စကပ်ဝတ်ထားရင် ဒါန်းမစီးရဘူးလို့မေမေ မှာထားတယ်မဟုတ်လား "
ထိုအခါ သမီးဖြစ်သူ ပြောလိုက်ပုံက
" သမီး ဒီလောက် မအ ပါဘူးမေမေရဲ့ .. အတွင်းခံကို သူမမြင်အောင် ချွတ်ထားပြီးမှ ဒါန်းစီးတာပါ.."
« Reply #124 on: August 20, 2015, 09:39:52 AM »
" ဟင်..မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ..ညည်းက မငြင်းဘူးလား.."
" ငြင်းတော့ရော ဘာထူးမှာလဲအေ...ပိုက်ဆံမှ မပေးနိုင်တာ..."
" ဒါနဲ့လူပျိုကြီးနဲ့ အိပ်ရတာရော ဘယ်လိုလဲ..အိုကေရဲ့ လား.."
" အိုကေတာတော့ ပြောမနေနဲ့ ..ခုဆို အိမလခ ၆ လစာတောင် ကြိုပေးပြီးနေပြီ..."
« Reply #125 on: August 20, 2015, 09:45:49 AM »
လမ်းပေါ်မှာ ကားတွေ အရမ်းပိတ်နေတုန်း လူတစ်ယောက်က ကားမှန်ကိုလာခေါက်လို့ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး မေးလိုက်တယ်..။
" ဘာကိစ္စ ရှိလို့ လဲဗျ.."
" ဒီလိုပါဗျာ...အခု အကြိမ်းဖက်သမားတွေက လွှတ်တော်ကို ၀င်စီးပြီး.အစိုးရအမတ်တွေကို ဓားစားခံ ဖမ်းထားတယ်ဗျ..။အဲ့ဒါ
ဒေါ်လာတသန်းနဲ့ ပြန်ရွေးရမယ်တဲ့..။ မဟုတ်ရင် အကုန်လုံးကို ဓာတ်ဆီလောင်းပြီး မီးရှို့ သတ်ပစ်မယ်ဆိုလို့ကျနော်တို့ အဖွဲ့့က
ကားတစ်စီးချင်းစီ လိုက်ပြီး အလှူခံနေတာပါ.."
" သြော်...ဂလိုလား...တခြားကားတွေကရော ဘယ်လောက် လှူကြသလဲဗျ."
" အင်း..တစ်စီးကို တစ်ဂါလံလောက်စီတော့ လှူကြပါတယ်..."
« Reply #126 on: September 11, 2015, 03:23:37 PM »
ရည်းစားနဲ့ ချိန်းတွေ့ ဘို့ခွင့်တောင်းလာတဲ့သမီးဖြစ်သူကို အမေကမှာတယ်..။
"သမီးလည်း ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီ ဆိုတော့ အမေ မတားတော့ပါဘူး..ဒါပေမဲ့ လက်မထပ်ခင်မှာ ရည်းစားကို
ခါးပတ် ပတ်ထားတာရဲ့ အောက်ပိုင်းကို ခွင့်မပြုနဲ့ သမီး.."
" ဟုတ်ကဲ့ပါ.မေမေ့စကားကို တသွေမတိမ်း နားထောင်ပါ့မယ်.."
" လိမ်မာလိုက်တဲ့ သမီးလေး.."
ဒါနဲ့ ..အိမ်ကအထွက် ခြံအပြင်ရောက်တာနဲ့သမီးအလိမ်မာလေးက ခါးက ခါးပတ်ကိုဖြုတ်ပြီး ဒူးခေါင်းမှာ ပတ်လိုက်တော့တယ်..
« Reply #127 on: September 11, 2015, 03:30:03 PM »
နယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ယောင်္ကျားက မိန်းမဆီ စာရေးလိုက်တယ်..။
" သို့ 
အချစ်လေးရေ..ကိုယ် ဒီလ အသုံးများသွားလို့ပိုက်ဆံမပို့ နိုင်တော့ဘူးကွာ..ဒါပေမဲ့ မင်းအတွက် အနမ်းပေါင်း ၁၀၀ ပေးလိုက်တယ်နော်
ကြည့်ပြီးသာ သုံးပေတော့ အချစ်လေး..."
နောက် ရက်အနည်းငယ်ကြာတော့ မိန်းမဆီက စာပြန်လာသည် ။
ယောင်္ကျားရေ..ကိုကို့ ရဲ့ အနမ်းပေါင်း ၁၀၀ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..လောက်လဲ လောက်ပါတယ်..
ဒီလ အသုံးစာရိတ်ကို ပြောပြမယ်နော်...
၁။ နွားနို့ ပို့ သမားကို တစ်လစာ နွားနို့ အတွက် အနမ်း ၂ ပွင့်..
၂။ EPC ကလူကို တစ်လစာ အနမ်း ၇ ပွင့်..
၃။ အိမ်ပိုင်ရှင်ကတော့ အိမ်ငှားခ မယူပဲ တစ်နေ့ ကို အနမ်း ၂ ပွင့် ၃ ပွင့် လာယူတယ်..
၄ ။ super market ကတော့ အနမ်းနဲ့ တင်မရလို့တခြားဟာပါ ပေးလိုက်ရတယ်.
၅ ။ တစ်ခြား အထွေထွေ အနမ်းပွင့်က အပွင့် ၄၀
သူတို့ အားလုံးက သဘောကောင်းကြတယ်..လိုလိုလားလားနဲ့ ကို အနမ်းတွေကို ယူသွားကြတယ် သိလား..ဒါပေမဲ့ 
စိတ်မပူပါနဲ့ နော်...ချစ်လေးမှာ အနမ်း ၃၅ ပွင့် ရှိသေးတယ်..။ ဒီလတော့ သုံးဘို့ကောင်းကောင်းလောက်ပါတယ်...
နောက်လရော ဒါမျိုး လုပ်ရမှာလားဟင်...
ကိုကို့ ရဲ့ ချစ်လေး....."
« Last Edit: September 11, 2015, 03:37:56 PM by မင်းခေါင် »
Chit Min Maw
« Reply #128 on: September 12, 2015, 06:28:24 AM »
အပတ်တကုတ် ကြိုးစားကြတာ ဖုတ်ပူမီးတိုက်ပေါ့
ဖတ်ဖတ်ကိုမောလို့ ... အလုံးကြီး ဆို့နေသလိုပဲ။
« Reply #129 on: September 16, 2015, 01:38:40 PM »
ကျမက မောင့် အတွက်ဆို အမြဲ အဆင်သင့်ပါ မောင်..
မသုံးဘဲ ပစ်ထားရင် ကျမ အိတ်စပါယာ ဖြစ်သွားမှာ စိုးလို့ပါမောင်..
ကျမကို ညှစ်မယ်ဆိုရင် အောက်ခြေကနေ ပင့်တင်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ညှစ်ပါမောင်..
ကြုံရာနေရာက ထင်သလို ညှစ်ရင် ကျမ ပုံပျက် သွားမှာ စိုးလို့ပါမောင်..
ကျမက နဲနဲ ညှစ်ရင် များများ ထွက် တတ်ပါတယ်မောင်..
ညှစ်တိုင်းလည်း ထွက် တာပါပဲ မောင်..
အရေးကြီးတာလေး တစ်ခု မှာပါရစေ မောင်..
ကျမကို မောင် လိုအပ်သလောက်ထက် ပို မညှစ်မိပါစေနဲ့ မောင်..
ကျမ က ညှစ်တိုင်း ထွက်သလို ထွက် သွားပြီးရင်လည်း ပြန်သွင်းလို့ မရတော့လို့ပါ မောင်..
ကျမက သွားတိုက်ဆေးပါ မောင်..